Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 43
Eny; vitany. Ny zava-misy amin'ny reincarnation dia mazava ho azy ao amin'ny fanontaniana. Ny Reincarnation — ho fampianarana, io lehilahy io, raisina ho saina, dia tonga amin'ny vatana ara-batana hianatra zavatra vitsivitsy sy hanao asa manokana eto amin'izao tontolo izao, ary avy eo dia mandao ny vatany izay maty amin'izany, ary rehefa afaka izany fotoana izay maka vatana vatana iray hafa, ary avy eo ny hafa sy ny hafa mandra-pahavitan'ny asany, mahazo ny fahalalana ary mahazo diplaoma amin'ny sekolin'ny fiainana izy - ny reincarnation dia eken'ny maro izay nahalala ny fampianarana ary nampihatra izany ho fanazavana. ny tsy fitoviana eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny zanaky ny ray aman-dreny mitovy aminy, sy ny lehilahy sy ny vehivavy fantatr'izy ireo izay manana toerany samy hafa ao amin'ny fiainana ary hafa ny fivoaran'ny toetra, na inona na inona fireneny, tontolo iainana sy fahafahana.
Na dia efa fantatra taloha aza, nandritra ny taonjato maro ny foto-pampianaran'ny reincarnation dia vahiny tamin'ny sivilizasiona sy ny fampianarana any Andrefana. Rehefa lasa mifankahalala bebe kokoa momba ilay loha hevitra ny saina dia tsy hahatakatra ny reincarnation ho toy ny vinavina ihany izany, fa hahatakatra izany ho zava-misy, ary ny fahatakarana dia manokatra fomba fijery vaovao sy olan'ny fiainana. Ny fanontaniana dia apetraka amin'ny fomba fijery hafa fa tsy ireo no napetrany. Mahatakatra matetika fa rehefa ny saina dia manana vatana vatana hafa voaomana ho azy ary mitombo, dia maka an'io vatana io io ary manohy ny asany sy ny traikefa izay ajan'ny saina ao amin'ny fiainana farany, satria ny biriky dia manampy biriky hafa ireo izay napetrany tamin'ny asan'ny andro teo aloha, na amin'ny maha tompon'andraikitra azy dia mitondra ny trosa sy ny trosany amin'ny fitambaran'ireo boky izay efa anisany. Mihatra amin'ny ankamaroan'ny olona miaina izany. Miaina ao anatin'ny fiainana miaraka amin'ny enta-mavesatra izy ireo ary misintona azy ireo, toy ny boriky mitondra ny entany, na manohitra izy ireo sy mandoka adidy sy ny zava-drehetra amin'ny ankapobeny, ary mandà ny hanaiky sy handray andraikitra, toy ny ampondra mionoka sy manipy ary mandoka ny entany. na inona na inona tonga eny.
Ny saina ao amin'ny Tandrefana dia misy filaharana hafa avy any Atsinanana, araka ny asehon'ny hamafin'ny sivilizasiona, ny fananganana, ny fanatsarana, ny fanovana fomba fiasa sy ny fanaon'ny andro, any Andrefana. Ny tery sy ny adin-tsaina dia mety lehibe kokoa noho ny taloha; fa noho ny hamafin'ny zava-dehibe kokoa dia azo atao ankehitriny noho ny azo natao taloha.
Ny fotoana sy ny tontolo iainana dia mety hametra ny fetra amin'ny asan'ny olona, ​​fa ny lehilahy iray dia afaka mampiasa fotoana sy tontolo ho an'ny asany. Ny lehilahy iray dia mety mandalo eo amin'ny fiainana mandeha ho azy, na mety hitsangana amin'ny tsy fahitana ary ho mpikatroka malaza eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ary hanome fotoana maharitra ho an'ireo biographers azy. Ny tantaran'ny lehilahy iray dia mety ho voasoratra ao amin'ny fasam-bolany hoe: "Eto ny vatan'i Henry Jinks. Teraka tao amin'ity tanàna ity izy tamin'ny taona 1854. Nihalehibe, nanambady, niteraka ny zanany roa, nividy sy nivarotra entana ary maty izy, ”na ny tantara dia mety hafa amin'ny fandaharana hafa, toa an'i Isaac Newton na Abraham Lincoln. Ny olona iray mihetsi-po, ary tsy miandry ny lazaina fa mampihetsi-po azy, dia tsy hananana fetra. Raha maniry ny hanao izany ny olona dia mety hiala amin'ny fiainana iray sy mankany amin'ny iray hafa ary hiasa mandritra izany dingana izany sy mankany amin'ny hafa, toa an'i Lincoln; ary raha manohy miasa izy, mikiry hanao zavatra eto amin'izao tontolo izao ary hotarihin'ny antony manosika, dia hanana asa lehibe natolotra azy, amin'ny fanaovana izay tsy hataony ho an'ny tenany irery fa hanao asa ho azy fotsiny. ho an'izao tontolo izao; ary noho izany, izao tontolo izao amin'ny hoaviny dia ho fanampiana fa tsy ho sakana ho azy sy ny asany. Io mihatra amin'ny toetran'ny besinimaro rehetra izay nanao ny asan'ny sy nampandeha avy amin'ny toeram-piainana iray mankany amin'ny iray hafa.
Saingy misy lehilahy izay, tsy ankatoavin'ny toerana nahaterahany na ny toerany eo amin'ny fiainana, miaina fiainana anatiny. Ny fiainana anatiny amin'ny lehilahy iray zara raha mandeha amin'ny firaketam-bahoaka, ary zara raha fantatry ny olom-pantatra akaiky. Raha ny tovolahy iray dia mandalo onjam-peo maro eo amin'ny fiainam-bahoaka, ny fahatanterahan'ny olona izay mety ho asan'ny fiainana hafa, ka ny lehilahy miaina fiainana anatiny dia tsy hianatra afa-tsy ireo lesona ireo ary manao an'io asa io. natao ho an'izany fiainana izany, fa mety hianatra sy hanao ny asa izay mety hitondrana azy hafa ho vita izy, raha nandà izy na tsy nahavita ny asany voalohany.
Miankina amin'ny lehilahy izany, ary inona no tadiaviny. Matetika ny fiovan'ny toeran'ny lehilahy na ny tontolo iainana amin'ny famaranana ny asa iray ary amin'ny fahavononana hanomboka asa hafa, na dia tsy izany foana no zava-misy. Ny fiovan'ny asa na ny toetrany tsirairay dia mety maneho ny fiainana hafa, na dia tsy voatery hitovy amin'ny asan'ny nofo iray manontolo aza izy io. Ny iray dia mety ho teraka ao amin'ny fianakavian'ireo mpangalatra ary voatery voatery hiara-miasa amin'izy ireo. Taty aoriana dia mety hahita ny tsy fangejan'ny mpangalatra izy ary avelany ho manao varotra. Mety handao ny varotra izy amin'ny ady iray. Amin'ny fehin-keviny dia miditra amin'ny orinasa izy, fa maniry ny fanatanterahana tsy mifandray amin'ny asany; ary mety mahatsapa be dia be ny iriny. Ny fiovana eo amin'ny fiainany dia mety ho vokatry ny toe-javatra nolefonina azy, ary ireo dia nateraky ny loza tsy nampoizina. Tsy izy ireo anefa. Ny fiovan'ny toe-piainana toy izany dia vita tamin'ny toe-tsainy. Ny toe-tsainy dia namorona na nanokatra ny lalana ho an'ny faniriana, ary dia toy izany no nahatonga ny fanovana. Ny toe-tsaina dia mitondra na mamela ny fiovan'ny toetran'ny olona eo amin'ny fiainana. Amin'ny fihetsiky ny sainy dia afaka manao ny asan'ny fiainana maro ny lehilahy iray.